အိန္ဒိယ: "နှလုံး၏ထိုးနှက်": တွစ်တာ ISRO ၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယခုအချိန်တွင်န်ကြီးချုပ်မိုဒီမှဓာတ်ပြု | အိန္ဒိယသတင်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "အိန္ဒိယ:" နှလုံး၏ထိုးနှက် ": တွစ်တာ ISRO ၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယခုအချိန်တွင်န်ကြီးချုပ်မိုဒီမှဓာတ်ပြု | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: "နှလုံး၏ထိုးနှက်": တွစ်တာ ISRO ၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယခုအချိန်တွင်န်ကြီးချုပ်မိုဒီမှဓာတ်ပြု | အိန္ဒိယသတင်း
Tele RELAY တစ်ခု7စက်တင်ဘာလ 2019
အိန္ဒိယ: ဝန်ကြီးချုပ်များ၏ပုံရိပ် Narendra Modi လက်ခံနှင့်စနေနေ့အများအပြားတွစ်တာအသုံးပြုသူများန်ကြီးချုပ်၏အမူအရာကိုခြီးမှမျးဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာနေရာတိုင်းတွင်တွေ့ရှိထားကြောင်းထားတဲ့စိတ်ခံစားမှု ISRO အကြီးအကဲနှစ်သိမ့်။
ISRO ၏ဥက္ကဋ္ဌဦး K သည် Sivan ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဂါဟာ lander များ၏ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဆုတ်ယုတ်မှုနောက်ဆုံးမိနစ်အကြာတွင်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်အတူလဲလှယ်တော်မူပြီးမှအခြေစိုက်အာကာသအေဂျင်စီကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်သည့်အခါပြိုကျ Vikram ] လမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ညင်သာစွာဆင်းသက်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်။
Sivan သိပ္ပံပညာရှင်များသည်မိမိဖှယျမိန့်ခွန်းအဘို့ဝန်ကြီးချုပ်ကျေးဇူးတင်ဖို့သူ့ကိုချဉ်းကပ်လာသောအခါမိမိအလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သူမိုဒီ, သူ့ကားမှဦးတည်ခဲ့သည်။ သို့သော် ISRO ၏ဥက္ကဋ္ဌကသူ့စိတ်ခံစားမှုကိုကိုင်ထားရန်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ဖြိုဖျက်ကြ၏။
မဆိုင်းမတွ, မိုဒီဖက်များနှင့် Sivan သက်သာ။
အဆိုပါ ISRO ၏ဦးခေါင်းကိုလက်ခံနှင့်နှစ်သိမ့်သည်ဗီဒီယိုန်ကြီးချုပ်မိုဒီတွစ်တာအသုံးပြုသူများသည်ကြားတွင်စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်နေသောခေါင်းစဉ်:
ဤသည်ကှေဲဖှယျဖြစ်ပါတယ်။ ငါ ISRO, K. Sivan ၏ဥက္ကဋ္ဌမိုဒီအကြောင်းကြားခံရပြီးနောက်မျက်ရည်ကျခဲ့ထင်ပါတယ်။ တင်းမာနေလေထု ... https://t.co/Ok3hrC9uM3
- ချန်ဒရာ R. Srikanth (@chandrarsrikant) 1567802055000
#ProudOfISRO ငါန်ကြီးချုပ်မိုဒီသည်၎င်း၏တပ်မက်ခြင်းအတိုင်းဆန့်သောအခါ https://t.co/ynewIgyb1Fanni19459010 ... အိန္ဒိယအာကာသဥက္ကဋ္ဌ, ငါ၏မျက်ရည်ကျောကိုင်] & amp; mdash နိုင်ဘူး; Totlani Krishan (@kktotlani) 1567825929000
@ANI @isro @PMOIndia ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကိုအကောင်းဆုံး pm တွင်၏တကယ်အထင်ကြီးခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်ဟန်ခြေဟန်ဖြစ်ပါတယ် ... ... https://t.co/Ugclyw2Uq3 ခံစားရ
& mdash; (manoj6sigma @) manoj Joshi 1567827323000
K သည် Sivan Narendra Modi ပျက်ကွက်ငိုကြွေးကြ၏။ အဘယ်အရာကိုသူတို့ကိုခထဲကနေ, မြေဆီလွှာ၏သားဖြစ်ကြောင်းမှီဝဲ ... https://t.co/KKHLaw8ZQf
- Vinayak (@vinayak_jain) 1567827653000
သူတို့ကဟားဗတ်စီးပွားရေးကျောင်းမှာသင်ကခေါင်းဆောင်မှုသင်ပေးကြဘူး။ မိုဒီဝန်ကြီးချုပ် Sivan နှင့် ISRO ၏သူ့အဖွဲ့ဂုဏ်ယူ ... https://t.co/rz1BrhT7ut
- မှူး (@SeaSkipper) 1567827023000
စိတ်ခံစားမှုယခုအချိန်တွင်: အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီမစ်ရှင် 2e လမတတျနိုငျနောက်၌ဟစ်သူ ISRO, K. Sivan ၏ဦးခေါင်းကိုကူးပြောင်း ... https://t.co/pe0Y5GLuP2
& mdash; ROHIT Sharma Fan Club နီပေါ (@ imro45fannepal) 1567830437000
ဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi ကသူ့ကျဆုံးခြင်း (Sivan) ပြီးနောက်, ISRO K ကို Sivan ၏ဦးခေါငျးကိုပွေ့ဖက်ခြင်းနှင့်နှစ်သိမ့်! !! ဤသည်ကိုအကြှနျုပျအျောဟစျစေသည်။ K သည်ဆိုပါက ... https://t.co/lLgwEpEytl
- Sanjeev Chauhan (@ Sanjeev50638216) 1567833968000
ထိုနေ့၏သြဇာအာဏာအရှိဆုံးပုံရိပ်တွေတစ်ခုမှာ။ ဒေါက်တာ K သည် Sivan ဤမျှလောက်များစွာသောအတှကျအိပျည၏စိတ်ခံစားမှု ... https://t.co/hU6CBdm2vO အိပ်ပါစေ
- Saurav (@IngGooner) 1567827484000
#ISROMissions # Chandrayaan2) ကိုနှလုံး ... https://t.co/psEQp88DLe./454510 ကိုချိုးဖျက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ကြီးချုပ်၏လက်ရုံးအပေါ် K သည် Sivan ပဲ။ Udhya Raghavan (@RaghavanUdhya) 1567826088000
အိန္ဒိယ: | ဆိုနီယာဂန္ဒီက၎င်း၏ "မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်များနှင့်ခြီးမှမျးအားထုတ်မှု" အတွက် ISRO congratulates အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: ISRO က၎င်း၏အမျိုးသားရေးအိပ်မက်နားလည်သဘောပေါက်: န်ကြီးချုပ်မိုဒီ Chandrayaan-2 ပျက်ကွက်ရင်ဆိုင်နေရ | အိန္ဒိယသတင်း
တိုင်းပြည်ဂီတပွဲတော်အတွက် Carrie Underwood၊ Eric Church, Lil Nas X နှင့်လူများပါဝင်သည်
ဤအထူးသီးသန့် Delta Amex - BGR ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အတူထောင်ပေါင်းများစွာအပိုဆုမိုင်ပေါင်းများကိုရယူပါ
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်6,080